Zarkana ee Las Vegas by Cirque Du Soleil
Mareykanka Nevada Las Vegas
Zarkana ee Las Vegas by Cirque Du Soleil - XIDHIIDH
Ku biirista Las Vegas 'Version of Circus
Tani waxay muujinaysaa inay xirantahay
Cirque du Soleil ayaa hadda la mid ah Las Vegas waxayna ku xiran tahay niyaddaada waxaad arki kartaa noocyo kala duwan oo muujinaya. Xusuuso inaad dib u noqotid markaad ilmo ahayd oo aad sugeysay inaad aragto wareeg ah. Waxaad filaysay waxyaabo yar. Saddexda siddeed, qoryaha, libaaxyada. Waa hagaag, Zarakana Cirque Du Soleil ayaa sidaas u sameeya. Waxay ku siisaa dhab ahaantii aad filaysay. Ma jiro wax saan-doon ah oo isku dayaya in ay sameeyaan shaashaddooda, mana jirto koox muusik ah oo muusik ah oo ka dambeeya soo-saarkaan.
Iyadoo Zarkana ay si sax ah u heshay waxa aad u timid iyo taasi waa waxa Cirque Du Soleil oo dhan ku saabsan.
Liistada ugu weyn ee Cirque du Soleil waxay muujinaysaa Las Vegas
Qolka, muyuusig, muusikada ayaa kaa dhigi doona masraxa maskaxdka ah ee ku saabsan waxa kaliya ee ku dhacay. Waxaad xusuustaa kala bar wixii aad aragtay maxaa yeelay wax badan ayaa dhacaya. Haddii aad tahay qof ka tirsan ciidamada Cirque du Soleil waxaad dareemi kartaa inaad u baahan tahay dheeraad ah. Taasi waa sababtoo ah waxaa lagaa necbahay dhamaan ficilada weyn ee aad u aragtay inaad raadinayso xariiq sheeko adag. Inkasta oo ay ka wada hadleen bandhigida dhowr saacadood oo hore waxay arkeen circa oo ah Cirque du Soleil oo ku taala Zarkana sababtoo ah waxay bixisaa dhammaan qaybaha xooggan ee ka dhigaya inay muujiyaan caansaanka Las Vegas.
Halkee ayaan arki karaa Zarkana Cirque Du Soleil:
3730 L Las Vegas Blvd. Koonfur
Eeg bogga Zarkana ee Macluumaadka
Maxaad ka filan kartaa Zarkana Las Vegas:
Markaad tagto tiyaatarka Aria waxaa laguu riyaaqi doonaa cabbirka iyo dareenka booska.
Waxay dareemeysaa sida masraxa dhabta ah. Waxay dareemeysaa sida in qaababka qaar ka mid ah ay ka dhaceen qolka weyn. Waa mid cusub laakiin waxay sameeyeen shaqo fiican oo lagaa saaro inaad ka fogaato Las Vegas oo ah meel lagu garto madadaalo tayo leh.
Marka dariishadu ku soo baxdo Zarkana indhahaaga ayaa ku wareegsan, waxaadna sawirro badan oo sawir ah ku qaadataa waqti yar.
Maaddaama muuqaalka sii socdo waxaad fiirin doontaa, hoos udhigi doontaa iyo dhinaca bidix iyada oo wax walba ka dhacaya meel walba oo dhan.
Waxaan ku siin doonaa talooyin dhowr ah oo ka mid ah ciyaartoygeyga aan jeclahay, laakiin ma burburin doono adiga. Waxyaabaha ugu muhiimsan aniga ahaan waxaa ka mid ah haweeyn awood leh oo kubbada lumisa karo si ka fiican sidii aan weligay u arkay. Qaar badan oo ciid ah oo rinjiyeyn sawir loogu talagalay dadka dhagaystayaasha iyo dadka calaamadeysan ee duulaya iyagoo hawada ka dhigaya in aad qabsatid qulqulka gacanta. Taasi waa cirifka jilbaha marka la eego tayada aad ka arki doonto marxaladda soo socota ee Zarkana ee Las Vegas.
Waa inaan farta ku fiiqaa in aan runtii ku riyaaqay bandhigga, laakiin waxaan samayn karaa iyada oo aan Cirque du Soleil qalooc u eg oo u muuqda in ay ka muuqdaan bandhig kasta. Waxaa caado u ah Mystere marka ilmuhu korayo oo dharbaaxo ku dhex jira oo dhan ku dhex maraya bandhigga, laakiin Zarkana marka Zark, rikoodhada, waxay u egtahay in ay sharaxayso waayihii hore, hadda iyo mustaqbalka ee muujinta inay ka xanaaqayso.
Macluumaadka Ticket ee Zarkana ee Las Vegas by Cirque Du Soleil:
$ 69, $ 99, $ 130, $ 140, $ 150, $ 180 (oo lagu daro canshuurta iyo khidmadaha)
Tikidhada waxaa laga heli karaa Ticketmaster ama Xafiiska ARIA Box Office.
Wac: 877.253.5847 ama 702.531.2031
Zarkana wuxuu jimcaha ku qabtaa ilaa Talaadada saacadda 7:00 iyo 9:30 galabnimo.
Ma jiraan bandhigyo Arbaco ama Khamiista.
Khaladaadka caadiga ah si looga fogaado Dhismaha Las Vegas
Eeg Cirque Du Soleil ee Las Vegas
Booqo Big Hash House A Go Go Las Vegas
Numbers Guy at Wynn Las Vegas Sportsbook
Ka hor intaadan Isku Dili Karin New Years ee Las Vegas
London, UK iyo Paris Saint-Malo tareen, hawada iyo baabuurka
Juneyao Airlines waa shidaalka duulimaadka u adeegaya Shiinaha oo ku salaysan Shanghai
Dabaaldegyada ugu wanaagsan xagaaga ee Cleveland
Sidee baan dib u cusbooneysi karaa baasaboorkeyga Mareykanka?
Caqabado ku ah magaalooyinka iyo magaalooyinka Greater Phoenix
Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Arizona
Liisaska Los Angeles
5 ka mid ah Baagaga Wanaagsan ee RV Ontario
Washington Film Film Festival 2017
Talooyinka ugu sarreeya ee loogu talagalay in la mariyo Morocco